काश्मिरमा प्रहरीमाथि किन बढ्दैछ आक्रमण ? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > काश्मिरमा प्रहरीमाथि किन बढ्दैछ आक्रमण ?
१९ भाद्र २०७५, मंगलवार १४:२०
नयाँ दिल्ली –भारत प्रशारित काश्मिरमा चरमपन्थीले यसै वर्षमात्र ३१ प्रहरीको हत्या गरेका छन्। काश्मिर विद्रोह दुष्परिणाम यहाँ प्रहरीले भोग्नु परेको छ। २२ अगस्टमा मोहम्मद अशरफ डालाई उनकै घरमा हत्या गरियो। त्यो दिन इद थियो। ४५ वर्षीय सब इनिस्पेक्टर अशरफको पोस्टिंग केन्द्रीय काश्मिरमा भएको थियो।
तर उनी आफ्नो परिवारसँगै विदा मनाउन आफ्नो गाउँ गएका थिए जहाँ उनको हत्या भयो। उनको परिवार काश्मिको दक्षिणी पुलवा जिल्लाको लार्भे गाउँमा बस्दै आएको थियो। जहाँ धान र स्याउको बगैचा छन्।
जुलाई २०१६ मा चरमपन्थी बुरहान वानीको हत्यापछि यो गाउँमा हिंसा भड्किएको छ। हालका महिनामामा उनलाई आफ्नो घर वा कतै जान सावधानी गर्न भनिएको थियो।
मुस्लिम पृथकतावादीले १९८९ मा मुस्लिम बहुलवादी काश्मिरमा भारती सत्ताको विरुद्धमा हिंसात्मक अभियान सुरु गरेका थिए। यो क्षेत्र भारत र पाकिस्तानबीच हुने टकरावको केन्द्र हो।
भारतले3मध्ये २ युद्ध यसैका लागि गरेको छ। भारत पाकिस्तानमाथि काश्मिरलाई अशान्त बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर पाकिस्तानले यस्तो आरोपमको खण्डन गरिरहेको हुन्छ।
दशकौदेखि भारत सरकारले प्रहरीलाई उनकै सहर वा नजिकैको क्षेत्रमा पोस्टिंग गरेको छैन। किन भने उनीहरुको परिवारलाई सुरक्षित राख्न सकियोस। तर दक्षिणी काश्मिरका केही भाग जस्तै पुलवामा स्थानीय यूवाहरु विद्रोमा सहभागी भएसँगै प्रहरीमाथि आक्रमणका घटना बढिरहेका छन्।
जसले डारको हत्या गर्यो उसलाई थाहा थियो उनी के गर्छन् र कहाँ जान्छन्। उ लुकेर डारको घरमा लुकेर घुस्यो, मास्क लगाएको र काँधमा राइफल बोकेको थियो उसले।
जब आक्रमणकारी डारको घरमा घुसे त्यति बेला डार स्थानीय मस्जिदमा नमाज पढिरहेका थिए। आक्रमणकारीले डारकी श्रीमती शैला गनीलाई बन्दुक देखाँदै भने, ‘आफ्नो मुख बन्द गर।’ उनीहरुले डारका दुबै छोरालाई धकेले।
डाका छोरा जिबरानले भने, ‘उनीहरुले मेरो हात खिच्दै सोधे तिम्रा बाबु कहाँछन्।’ जब डार घर फर्के उनीसँग उनकी १ वर्षकी छोरी पनि थिइन्। आक्रमणकारीले जबरजस्तै डारलाई भान्सामा लगे जतिबेला उनकी छोरी काखमा थिइन्। डार अफ्नी छोरीलाई छोड्न चाहँदैनथे तर आक्रमणकारीले छोरीलाई अलग गरिदिए।
शैलो भनिन्, ‘म कोठामा बसेर सबै सुनिरहेको थिएँ, यहीबीचमा गोलीको आवाज आयो।’ उनले घटनास्थलमै डारको मृत्यु भएको बताइन्।
दक्षिणी काश्मिरको एक गाउँ मुतलहामाका ६८ वर्षीय अब्दुल शाह भन्छन्, ‘के प्रहरी काश्मिरी हाईनन्? उनीहरुलाई निशाना बनाएर चरमपन्थी आफ्नो लक्ष्यलाई नोक्सान गरिरहेका छन्।’
बुरहान वानीको मृत्युपछि काश्मिरमा हिंसात्मक घटना बढेका छन्। काश्मिरी युवा आन्दोलन गरिरहेका छन् भने प्रहरीले आन्दोलन दबाउन प्याले गनको प्रयोग गर्यो।
यसपछि काश्मिरमा चरमपन्थी मारिएका घटना पनि बढेका छन्। २०१७ मा ७६ जना चरमपन्थी मारिएको छन् जो पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा बढि हो। यसै वर्ष दक्षिण काश्मिरमा मात्र ६६ जन चरमपन्थी मारिएका छन्। यो क्रममा प्रहरीमाथि पनि आक्रमण बढेको छ। काश्मिरका १ लाख ३० हजार प्रहरी चिन्तामा छन्।
जुन २०१७ मा सादा पोशाकमा रहेका एक प्रहरी मोहम्मद अयुबको श्रीनगरको व्यस्थ स्थानमा गोली हानेर हत्या गरियो। उनीमाथि युहरुमाथि गोली चलाएको आरोप थियो।
जुलाई २०१८ मा कस्टेबल मोहम्मद सलीलम शाह आफ्ना साथीसँगै माछा मार्न गएका थिए। तर उनी गायब भए। भोलीपल्ट एक बगैचामा बाइकले कुल्चिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो।
अधिकारीका अनुसार यो वर्ष प्रहरी र उनका परिवाका १२ सदस्यको अपहरण भएको छ। २८ अगस्टमा शंकास्पद चरमपन्थीले काश्मिरमा एक प्रहरीका छोराको अपहरण गरे। प्रहरी अनुसन्धानमा यो अपहरणमा हिजबुल मुजाहिद्दिन प्रमुख रियाज नाइकोसँग सम्बन्धितले यो अपहरण गरेको पाइयो।
नाइकोले काश्मिर प्रहरीलाई जागिर छोड्न वा नतिजा भोग्न धम्की दिएका थिए। तर केही काश्मिरी यूवा अँझै पनि काश्मिर प्रहरीमा जान चाहन्छन् । यसको एक कारण हिंसा र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण रोजगारीको कमी हुनु पनि हो।
यसैबीच काश्मिरी र प्रहरीबीच टकराव बढ्दै गएको छ। जुनमा सीआरपीएफका जवानको जीपले एक प्रदर्शनकारीलाई कुल्चेपछि हिंसा भड्किएको थियो। सीआरपीएफको भनाई के छ भने उनीहरु आफ्नो ज्यान बचाउन लागेका थिए तर स्थानीयवासीले भने जबरजस्ती भीडमा जीप चलाएको बताएका छन्।
डाका बाबु कादिम भन्छन्, ‘मानवता सकिएको छ, काश्मिरमा त धेरै पहिला सकिएको हो।’ बीबीसी
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित २४ जनाको टोली स्नानका लागि तातोपानी कुण्डमा
सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा मेजरसहित ७ घाइते